5ème dimanche de Pâques en malgache
Vous êtes ici : Accueil Aujourd'hui Petits bouts d’Evangile soeurs_prado 5ème dimanche de Pâques en malgache
Ce dimanche de Pâque, nos soeurs de la communauté de Kianjavato à Madagascar
nous fait goûter le fruit de leur étude de l'Evangile...
Izaho no tena foto-boaloboka,
ary ny Raiko no mpamboly.
Ny sampana rehetra tsy mamoa
eo amiko dia esoriny,
ary izay rehetra mamoa dia rantsanany
mba hampamoa azy bebe kokoa.
Efa madio hianareo izao,
noho ny fampianarana nataoko taminareo.
Mitomoera ao amiko,
ary izaho hitoetra ao aminareo.
Fa ny sampana izay tsy miray
amin'ny foto-boaloboka tsy mahazo
mamoa ho azy, ary toy izany koa
hianareo raha tsy mitoetra ao amiko.
Izaho no foto-boaloboka,
ary hianareo no sampany.
Izay mitoetra ao amiko sy itoerako no mamoa be,
satria raha tsy izaho dia tsy mahefa
na inona na inona hianareo.
Izay tsy mitoetra ao amiko dia
ariana any ivelany tahaka ny sampana ka maina;
ary hangonina ny sampana ka hatsipy ao anaty afo,
Raha mitoetra ao amiko hianareo
ka mitoetra ao aminareo ny teniko,
dia hangataka izay tianareo hianareo,
ka hatao aminareo izany.
Ho voninahitra ho an'ny Raiko
raha mamoa be hianareo sy tonga mpianatro.
“Jesoa Kristy no tena foto-boaloboka, ary ny Raiko no mpamboly ary isika no sampana ». io fanoharana ataon’i Jesoa io dia mampiray antsika tanteraka aminy sy ny Rainy. Ny zava-maniry dia mila fototra, fikarakarana, mamoaka ny hatsaràny ary mamoa.
- Izaho : Jesoa tena olombelona manambara ny maha Andriamanitra azy. Fanehoana feno fa miombon’aina tanteraka aminy isika raha tafaray aminy.
- voaloboka ao amin’ny TT dia maneho fitiavan’andriamanitra ny vahoaka israely, maneho hafaliana, fiainana. Maka ohatra ho foto boaloboka i Jesoa, fototry ny fiainantsika, manome antoka ny fahavokarantsika raha miray aminy. Raha velona ny fototra dia tsisy zavatra tokony hahafaty ny sampana raha tsy hoe tapaka, nihataka amin’ny fototra. Ambaran’i Jesoa mazava ny zavatra hanjo ny sampana mihataka : fahamainana, fahafatesana ary fahalevonana.
izay mamoa dia rantsanina: satria izy mihitsy no mikarakara ny sampana amin’ny fanomezany azy izay rehetra ilaina mba hamokarany. Voninahitry ny Ray ny fahavokarantsika sy ny fifikarantsika amin’i Jesoa. Indraindray adinontsika fa tia antsika izy, tsy omentsika toerana amin’ny fiainantsika, ka lasa maina y fiainana, fa Jesoa dia miantso antsika hiray aminy.
Hoy izy :” Izay mitoetra ao amiko sy itoerako no mamoa be”: fiombonana tanteraka aminy. Ny fianarana ny Teniny, ny vavaka dia mampiombona antsika amin’i Kristy. Fahaizana mandray Azy mba hahafahany manatanteraka ao amintsika izay irintsika.
ireo fitaovana entintsika mitoetra ao aminy : ny fianarana ny teniny, fandinihana azy ary ny fiainana azy amin’ny fiainana an-davanandro.
mitaky ezaka famolahan-tena izany, tsy vita raha tsy anaty fahatokisana sy fanantenana azy tanteraka. Izay rehetra te hamokatra ka mahatsapa ny fahalemena ary mamela ny famindraàpon’Andriamanitra hikoriana ao anatiny dia hahazo vokatra tsara.
Communauté de Kianjavato -Madagascar